Wiishashka Rakaabka Rakaabka ee Mashiinka Warshadda Qol -laawe ah iyo alaab -qeybiyeyaasha | Tianhongyi
Qolka mashiinka Tianhongyi wiishka rakaabka ka yar wuxuu qaataa teknolojiyadda is-dhexgalka sare ee isku-dhafan ee nidaamka xakamaynta microcomputer iyo nidaamka inverter, kaas oo si guud u hagaajinaya xawaaraha jawaabta iyo isku halaynta nidaamka. Qaabka hakinta baabuurka waa la beddelaa, raaxada mashiinka wiishka aan qolka lahayn ayaa si weyn loo hagaajiyaa, iyo xoojinta shaqada rakibidda iyo dayactirka ee mishiinka wiishka aan qolka lahayn. Waxay jebineysaa fikradda ah in wiishka ay tahay in lagu qalabeeyo qolka mashiinka, oo uu siiyaa abuuritaan kaamil ah meelaha xaddidan ee dhismayaasha casriga ah. Qaado qaybaha ugu fiican iyo qorshaha naqshadeynta qaab dhismeedka ugu macquulsan, iyo teknolojiyadda ka -hortagga shoogga iyo wax -ku -oolka si loo kala firdhiyo oo loo dheellitiro gariirka aan caadiga ahayn ee baabuurka si loo gaaro xasilloonida iyo dabeecadda. Waxay leedahay dabacsanaan sare, ku habboonaansho iyo isku halayn. Ku habboon guryaha, dhismayaasha xafiisyada, hoteellada, suuqyada wax laga iibsado iyo meelo kale.
Cabbirka baabuurka gudaha (mm)
Cabbirka albaabka (mm)
Jaantuska cabbirka badeecada
1. Cagaar iyo bay'ada u fiican, looma baahna qolka mashiinka wiishka ee gaarka ah, keydinta boos iyo kharash.
2. gariir hooseeya, buuq yar, deggan oo lagu kalsoonaan karo.
3. Wax -ku -oolnimada sare iyo keydinta tamarta.
4. Si sahlan loo rakibo loona dayactiro.
Qaabaynta usheeda dhexe
1. Mashiinka jajabka ee dusha sare ku rakiban: Mashiinka jajaban ee si gaar ah loo naqshadeeyey loona soo saaray ayaa loo adeegsadaa si loogu suurtogeliyo in la dhex dhigo baabuurka sare ee hoistway iyo derbiga hoistway, iyo golaha xakamaynta iyo albaabka dabaqa sare ayaa la isku daray. Faa'iidadiisa ugu weyni waxay tahay in mashiinka jiidista iyo xaddidaha xawaaraha ay la mid yihiin kuwa wiishka leh qolka mashiinka, iyo golaha xakamaynta ay fududahay in laga saaro oo la dayactiro; khasaaraha ugu weyn ayaa ah in culeyska wiishka lagu qiimeeyay, xawaaraha lagu qiimeeyay iyo dhererka qaadista ugu badan ay saameeyeen cabbirrada guud ee Caqabadaha mashiinka jahawareerka, qalliinka gurmadka degdegga ah waa mid adag oo adag.
2. Mashiinka jajabka ee hoos u dhaadhaca: Ku rid mashiinka jiidista godka, oo ku dheji kabadhka kontoroolka inta u dhexaysa gaadhiga godka iyo darbiga dariiqa. Faa'iidadiisa ugu weyni waxay tahay in kordhinta culeyska wiishka, xawaaraha lagu qiimeeyay iyo dhererka qaadista ugu badnaan kuma koobna cabbirrada mashiinka jaranjarada, iyo hawlgalka gurmadka degdegga ah waa mid sahlan oo fudud; khasaaraha ugu weyn ayaa ah in mashiinka jiidista iyo xaddidaha xawaaraha uu ku jiro cadaadis Way ka duwan tahay wiishashka caadiga ah, sidaa darteed waa in la hagaajiyaa naqshadeynta.
3. Mashiinka jiidista ayaa la saaraa baabuurka: mashiinka jiidista ayaa la saaraa baabuurka dushiisa, kabadhka xakamaynta ayaa la dhigayaa dhinaca baabuurka. Qabanqaabadan, tirada fiilooyinka la socda ayaa aad u badan.
4. Mashiinka jiidista iyo kabadhka xakamaynta waxaa la dhigayaa meel bannaan oo ku taal darbiga dhinac ee hoistway: mashiinka jiidista iyo kaantaroolka kontoroolka waxaa lagu meeleeyaa furitaanka loo qoondeeyey derbiga dhinaca dariiqa ee dabaqa sare. Faa'iidada ugu weyn ayaa ah inay kordhin karto culeyska wiishka, xawaaraha lagu qiimeeyay, iyo dhererka qaadista ugu badan. Waxaa lagu qalabeyn karaa mashiinnada jiidista iyo xaddidayaasha xawaaraha ee loo isticmaalo wiishashka caadiga ah. Waxa kale oo ay aad ugu habboon tahay rakibidda iyo dayactirka iyo hawlgallada gurmadka degdegga ah; qasaarooyinka ugu waaweyn ayaa ah, Waxaa lagama maarmaan ah in si habboon loo kordhiyo dhumucda derbiga dhinac ee dariiqa hoodway -ga ah ee loo qoondeeyey furitaanka lakabka sare, iyo in albaab dib -u -hagaajin ah lagu rakibo bannaanka furitaanka darbiga dariiqa.
Hore: Ammaan ah, lagu kalsoonaan karo oo fudud si loo rakibo guddiyada albaabka wiishka
Xiga: Tamarta Isticmaalka Kaydka Haydarooliga
Wiishka Panoramic oo leh Codsi Weyn Oo Hi ...